ဒါဟာအစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပ | Apg29
အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် Stefan Eliasson
ဤနည်းကလုပ်ရပ်တွေရဲ့အပြစ်လွှတ်။ Louisa နှင့် Maren, ထူးခြားတဲ့မဟုတ်မကြာသေးမီကလစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ 34 ခေါင်းဖြတ်သတ်ခရစ်ယာန်တွေကိုအတူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သင်္ချိုင်းတွင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါသက်သက်အရွယ်အစားအစ္စလာမ်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာပြီးနောက်သမိုင်းရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာဖြစ်ပြီးအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့တစ်ဦးရွှံ့အရင်းအမြစ် (ကုရ်အာန် 18:84) တွင်နေရောင်ညဦးတိုင်းအစုံကြောင်းယုံကြည်ဖို့ရွေးချယ်ကြောင့်ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံကျော်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.6 ဘီလီယံလူဦး, မွတ်စလင်တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်တဲ့အရေအတွက်ကမဟုတ်, အဝိဇ္ဇာ, စွန့်ခွာချင်သောသူတို့အဘို့သေဒဏ်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှု, မြင့်သောကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများကြောင့်။
အဘယ်အရာကိုရန်ကျမ်းနှင့် hadith ၏အဝိဇ္ဇာပင်အစ္စလာမ်ဘာသာအတွင်းအကြီးအကပြောပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်အများစုဖြစ်လျှင်ဤထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝတွေကိုပြောသည်ပါပြီဘာလဲ, အစ္စလာမ်ဘာသာကသာငြင်းအမှန်တရားကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ကမွတ်စ်လင်သတင်းရင်းမြစ်မေးခွန်းထုတ်ဖို့မသင်ယူကြသည်။
ကုရ်အာန် 33 ( "အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်သူ၏ Messenger ကိုဤအမှု၌အခမဲ့ရွေးချယ်မှုရှိသည်ဖို့, တဦးတည်းအရာဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါဟာတစ်ဦးသစ္စာစောင့်သောသူသည်သို့မဟုတ်သစ္စာစောင့်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးမဟုတ်ကိုက်ညီနှင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်သူ၏တမန်တော် disobeys သောသူမူကားထင်ရှားအမှားအတွက်ထောင်ချခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ " : 36)
"ဘုရားသခငျသငျတို့သညျ၏တမန်တော်ယခုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်နောက်ဆုံးနေ့နေ့အတွက်မျှော်လင့်ခြင်း, မကြာခဏဘုရားသခငျသညျမြွက်တော်မူသောသူများအတွက်စံနမူနာကောငျးရကွပွီ။ " (ကုရ်အာန် 33:21)
အစ္စလာမ်ဘာသာကျမ်းစာရဲ့ contents တွေကိုလှဲသည့်အခါခရစ်ယာန်အသိပညာဘို့အစွမ်းကုန်အရေးပါမှုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မွတ်စ်လင်သူချင်းနိုင်ငံသားများမှဧဝံဂေလိတရားဝေမျှတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကသူတို့ကျွန်တော်ဖော်ပြသည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအဓိပ္ပာယ်လွဲမှားပြီးရေးသားပုံကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်တွေကိုယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောသညျကြောင်းဥပမာအားငြင်းခုန်။ မွတ်စလင်တစ်ဦးအဘို့, ဤဘုရားအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သားခဲ့ကြရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်, ထို့နောက်သောကိုရမ်ကျမ်းသွန်သင်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
"ဘယ်လိုကလေးတွေရှိသည်ဖို့ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဧကန်အမှန်အလို, ထို့နောက်သူကမျှဇနီးရှိသနည်း" (ကုရ်အာန်6း 101)
အလားတူသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏မှန်သည်။ အဘယ်သူမျှမခရစ်ယာန်သမိုင်းအစဉ်အရှိပါတယ်ဖြစ်စေသုံးပါးတစ်ဆူဘုရား, ယေရှုနှင့်မာရိ၏ရှိရေးမယ်လို့ယုံကြည်သည်သို့မဟုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာအယူဝါဒကဒီကျနော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကားအဘယ်သို့သောအမွတ်စ်လင်သင်ပေးသောကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အားဖြင့်ပုံပျက်နေသည်။
"ဘုရားသခင်ကတောင်မှအခါ, ယရှေု, မာရိ၏သား, သငျသညျလူပွောခဲ့:" ဘုရားကိုမကိုးကွယ်မယ့်အစားဘုရားသခင်ကဲ့သို့ငါနှင့်ငါ့မိခင်ကိုယူသွားပါ! (ကုရ်အာန်5း 116) ""
အဆိုပါ core ကို
ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း၏အလွန်အနှစ်သာရယေရှု၏သေခြင်း, ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငြင်းဆိုသည်သာမက, ဤအယူဝါဒဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့များသောအားဖြင့်မွတ်စ်လင်သည်ဤတိုကျခိုကျဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြသောအခါခုခံကာကွယ်ဖို့ရှိသည်။
"တဖန်, ကျနော်တို့ဆက်ဆက်ခရစ်တော်ယေရှုမာရိ၏သား, ဘုရားသခငျ၏ Messenger ကိုကွပ်မျက်ကြပြီ, ဒါပေမဲ့သူတို့မအသတ်ခံမဟုတ်သလိုသူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပေမယ့်သူတို့ကသာဒါသူတို့ကိုသလိုပဲ, သူတို့ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအကြောင်းငြင်းခုန်သောသူတို့က, ဧကန်အမှန်, မသေချာမရေရာခဲ့ကြပြီ အထံတော်၌အသိပညာ, ဒါပေမယ့်လိုက်နာရန်သာယူဆချက်မျှ; သူတို့အမှန်တကယ်အသက်တာ၌သတ်လေ၏မလာကြဘဲဘုရားသခငျအားကြီးသောပညာရှိသည်ဘုရားသခင်, သူ့ကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။ (ကုရ်အာန် 4: 156) "
အဝိဇ္ဇာအစ္စလာမ်ဘာသာကိုအကောင်းဆုံးဆိုရမှာပါရှိရာ, အကြီးမြတ်ဆုံးသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ငံများ၌။ ဆွီဒင်ဒီဟာအကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲ။ အထွေထွေအဝိဇ္ဇာမီဒီယာ, နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်မွတ်စလင်တရားဟောဆရာဘာမှပြောနိုင်နှင့်လူများကသူတို့ကိုယုံကြည်စေသည်။
ဒီဥပမာတိုက်ခိုက်မှုမှအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နာမ၌အခြားသေစေနိုင်သောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအီမာမ်ကနေကြားမရေမတွက်နိုင်သောအကြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့မကြာခဏအနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုလေးစားသောအဖြစ်ဥပမာမိုဟာမက်အမျိုးသမီး၏လက်ျာတိုက်လေယာဉ်ခဲ့ကွောငျးကိုကွားသိ။ ဤရွေ့ကားမုသာစကားကိုသော်လည်း, လူများကယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ Louisa Vester ရွာသား Jespersen နှင့် Maren Ueland ဥပမာနှစ်ခုအမျိုးသမီးငယ်ရက်စက်စွာမော်ရိုကိုအတွက်အားလပ်ရက်အပေါ်ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလူသတ်မှုအစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်ပြည်နယ် SVT နှင့်အတူပြုကြရန်မလိုပါကြောင်းဟုဆိုကာတစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားတွင်တစ်စုံတစ်ဦးကမှပေါ်တံခါးကျင်မှအမြန်လျှပ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်အတူလုပ်ဖို့အရာရာသာရှိပါတယ်။
လူသတ်မှုတွေအများကြီးပြောနေသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါ။ သူတို့ကိုငါသူတို့သညျငါ့ကိုတက်သော့ခတ်ဖို့သေချာလုပ်သောလူမှုမီဒီယာအပေါ်အရာအားလုံးနဲ့ post shoot, ငါတို့သည်နှစ်ခုခရီးသွားဧည့်အပေါ်မှာရောက်လိမ့်မယ်လို့ရက်စက်စွာဟလာလ်သေသတ်ခြင်းငှါငါ၏အဆွေပြောခဲ့တယ်။ အဘယ်အရာကိုလူသတ်သမားများစာရွက်စာတမ်းများအပြစ်လွှတ်? ရန်ကျမ်းနှင့် hadiths သောကြောင့်,
"ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏တမန်တော်စစ်တိုက်ခြင်း, မြေကြီးပေါ်မှာမကောင်းသောအကြံကိုသွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးသောသူတို့၏လစာ, လိမ့်မျှသာသူတို့အသတ်ခံသို့မဟုတ်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေ, ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့လက်ခြေ crosswise ပြတ်ပြီ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့တိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်စေခြင်းခံရပါတယ်။ ဤသည်ယခုဘဝ၌၎င်း, လာရန်အသက်တာ၌မိမိတို့၏အရှက်ကွဲသူတို့ကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောပြစ်ဒဏ်စောင့်ကြိုရလိမ့်မည်။ "(ကုရ်အာန် 5:37)
၏မရေပြစ်မှုကိုပြုသဖြင့် "တိုက်ပွဲတွေဘုရားသခင်နှင့်သူ၏တမန်တော်, မြေကြီးပေါ်မှာမကောင်းသောအကြံကိုသွေးထိုးလှုံ့ဆော်" နှစ်ခရီးသွားဧည့်အဘယျသို့ရှိသနည်း Louisa နှင့် Marens လူသတ်သမား IS မှသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်။ နော်ဝေနှင့်ဒိန်းမတ်ရောတိုက်ဖျက်ဖို့အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာလှူဒါန်းခဲ့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Louisa နှင့် Maren ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အရှင်အထက်တွင်ပြစ်မှုများ၏အပြစ်ရှိကြောင်းအားဖြင့် IS ငွေကြေးထောက်ပံ့။
"အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်များ၏အကြောင်းရင်းထဲမှာစစ်သည်တော်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားသူကနည်းနည်းလေးအတွက်စစ်သည်တော်ရဲ့ဆုလာဘ်ထံမှ detracts ကြောင်းမပါဘဲ, သူ့တူသောအကျိုးကိုရကြလိမ့်မည်။ " (Sunan အိဗ် Majah 2758)
34 ခေါင်းဖြတ်သတ်ခရစ်ယာန်တွေကိုအတူ mass သင်ျခြိုငျး
ယေရှုရဲ့ပြန်လာ, Stefan Eliasson ၏မျှော်လင့်ခုနှစ်တွင်
Apg29.nu ထက်အခြားဖွငျ့ဖြစ်ကြောင်းဆောင်းပါးများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဘလော့ရဲ့ site ကိုမျှဝေမအမြင်များရှိနိုင်ပါသည်။